Maitiro emagetsi: shanduko shanduko kana kugadzirisa? | Ehupfumi Zvemari
Maitiro emagetsi: shanduko shanduko kana kugadzirisa?
Iyi haisi nguva yakanaka yehunhu hwesangano remagetsi. Mumavhiki apfuura, nepo misika yemari yakaona vamwe kukwira kusimukaIzvozvowo hazvina kuitika neizvi zvirevo zvekudyara. Vakanyudzwa mune yekuneta semhedzisiro yekuwedzera kwakaitika mumwedzi mitanhatu yekupedzisira. Iko kukosha kwaro kwakakosheswa kusvika kusvika makumi matatu muzana, seimwe yezvikamu zvakanyanya kusarudzika yeiyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities.
Asi parizvino ndiwo kukosha kwesekiti yemagetsi ayo ari kutungamira kurasikirwa paIbex 35. Nekurasikirwa mune yega yega yekutengesa chikamu kutenderedza imwechete muzana poindi. Kusimbisa kusasimba kukuru kuri kuita chikamu ichi kubva pakutanga kwechirimo. Nepo kune rimwe divi, iyo technical technical haikurudzire mamiriro acho kuti avandudze, zvirinani munguva pfupi. Uye zvakare, chikamu chakanaka chevaongorori vezvemari vari kukurudzira vashoma nevepakati varimi kuti vagadzirise zvinzvimbo zvavo mune izvi zvekuchengetedza.
Asi hapazove nesarudzo kunze kwekuongorora kana zviri kuitika kune aya masheya kukosha kuri nekuda kweshanduko mune kana kana, zvinopesana, ingori nyaya ye kungogadziriswa mumamiriro emitengo. Kunyangwe ivo vachiri kuda kupa mamwe masaini nezve izvo zviri kuitika nehunhu hweimwe yemasangano akakosha emari. Nekuti mukuita, imwe dhata yehukosha hwakakosha ichiri kushayikwa kuti ipe yakanyanya kana zvishoma kunyatsoongorora.
1 Maitiro emagetsi: chii chiri kuitika?
2 Kure nemitengo yepamusoro
3 Inotsigirwa nekugoverwa kwezvikamu
4 Mitengo yako ichakwira zvakadii?
5 Machechi anorwisa magetsi
Maitiro emagetsi: chii chiri kuitika?
Pane chinhu chiri kuvakuvadza zvakanyanya uye hachisi chimwe kunze kwekusahadzika kuri kugadzirwa mune zvematongerwo enyika zveSpanish semhedzisiro ye maitiro esarudzo. Hazvishamise kuti chikamu chemagetsi ndechimwe chezvakanyanya kugadziriswa uye zvinoenderana nesarudzo dzehurumende iri musimba. Mupfungwa iyi, kusava nechokwadi kuri kukonzera kuti mitengo yezvikamu zvayo ive ichidhonza mumazuva ano ekutengesa. Iko kusiri kutongwa kunze kuti inoramba ichidaro muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Izvo, vatengesi vaizorasikirwa nechikamu chemibairo yavakange vawana kusvika parizvino.
Nepo kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika izvo kutengesa kumanikidza kuri kutora nzvimbo zvakajeka pamusoro pevatengi. Mhedzisiro kune yekupedzisira inogadzirwa kubva kwekupedzisira kudonha. Kunyangwe isu tichafanirwa kunyatsoteerera pane zvinogona kuitika mwedzi wemazhizha usati wasvika. Iko chero chinhu chingaitika zvichienderana nekushanduka kwemisika yemari, zvese yenyika uye kunze kwemiganhu yedu. Mune rimwe remapoka ari kuumba kusahadzika kwakawanda pakati pevashambadzi vadiki nepakati.
Kure nemitengo yepamusoro
Mhedzisiro yekutanga yekugadziriswa uku ndeyekuti mitengo yavo irikuenda zvishoma nezvishoma kubva pahuwandu hwepamusoro. Kunyangwe mune chero zvazvingava, iwo mashoko akanaka eiyi tsika ndeyekuti ivo vachiri gara pane uptrend nhanho nguva dzose, saka tichazofanira kumirira kuti tione mugumo wacho. Nekuti hazvigone kukanganwika kuti mushure mezvose ivo vari munzvimbo dzakanakira zvido zvavo, kunyangwe zvisiri zvakanyanya senge mavhiki mashoma apfuura. Iko kiyi ichagara mukati mawo zvakare, aya maitirwo anogona kupfuura mitengo yepamusoro inogadzirwa mugore rimwe chete iri.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kukosheswa kuti mafambiro ese aya anogona kunge achingova maitiro ekukwira kwazvino mumazuva achangopfuura kana mavhiki. Iwe haugone kukanganwa kuti zvese zvinogona kuitika mumisika yemari pamberi pechikuva zvinogona kuunzwa nehupfumi kubva panguva dzino chaidzo. Asi chero zvodii, chenjera chaizvo pamusoro pezvingaitika pamberi pekutarisirwa kusvika kwemwedzi yezhizha. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Chinhu chakakosha kwazvo kufunga nezvacho panguva ino.
Inotsigirwa nekugoverwa kwezvikamu
Mupiro wakanaka kwazvo mumatanda emagetsi unotsigirwa nemugove wakakura unogoverwa pakati pevashandi. Uine chimbadzo kusvika pa7%, chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha pamari yenyika. Zvakawanda sekugadzira chikwereti chemari yakatarwa mukati memusiyano. Kuburikidza nemubhadharo wakavimbiswa uye wakatarwa gore rega rega uyo unozopa huwandu hwemari kuaccount account yevarombo vadiki nepakati. Pamusoro pekuita purofiti inogadzirwa nemamwe zvikamu zveSpanish stock stock. Sechikurudziro chakajeka chekudyara mune izvi zvemari zvinhu.
Nepo kune rimwe divi, inoumba ine simba nzira yekudyara ye gadzira bhegi rekuchengetedza kwenguva yepakati nepakati. Pasina kusiya misika yemari yemari, sezviri chishuwo chevashambadzi vadiki nevapakati. Nekuti nekuwedzera, imwezve purofiti inogona kuwanikwa kuburikidza nekudyara kwemari yedu inowanikwa. Kune rimwe divi, inogona kutariswa senge nzira yekudyara inoitirwa munhu anochengetedza kana kudzivirira chimiro nevashandisi vemusika wemasheya. Pamusoro pekubatsira kuri kugadzirwa nemagariro echinyakare, pamwe nemipendero yepakati isingasviki 1%.
Mitengo yako ichakwira zvakadii?
Mukati meichi chiitiko, zvakafanira kufunga kuti ingasvika kupi mitengo yezvikamu zvemakambani ari muchikamu chemagetsi. Nekuti chokwadi ndechekuti, imwe yemakiyi iri muchokwadi chekuti kuramba kwekare uko kwakazove zvitsigiro zvehumwe kukosha hakukundwe. Imwe yematanho akakosha ndiwo mutengo uyo makambani aya aive nawo pamberi peiyo rally yekusimudzira iyo yakavaendesa kuzvinzvimbo zvavo zvazvino. Uye izvo mune chaiyo kesi yeEndesa inopfuura nhanho dziri pakati pe19 ne20 euros pamugove. Izvo zvichave zvakafanira zvakakwana kuti vasapfuure iyo kuitira kuti vagare, zvirinani kwechinguvana, iyo yekumusoro maitiro mune ipfupi nepakati nepakati.
Nepo kune rimwe divi, zvichave zvakafanira kufunga nezviyero izvo iyo hurumende inobuda musarudzo dzinotevera Munyika yedu. Chinhu chichava chakakosha kwazvo kuona shanduko iyo makambani emagetsi achatora kubva panguva iyoyo, mune imwe pfungwa kana imwe. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu hunogona kubatsira bharanzi mukugadzirisa kwemitengo yayo, sezvo ichinyatsoonekwa kana uchigadzirisa nyaya dzinopisa kwazvo mushandirapamwe wesarudzo. Nemeso edu akaisa pamatanho anotorwa kubva panguva dzino chaidzo.
Machechi anorwisa magetsi
Kana isu hatikwanise kukanganwa kushoropodzwa kwakasimba kwenzvimbo iyo wezvematongerwo enyika kuruboshwe anga achiitisa. Iko United Tinogona kukwikwidza kumiriri weHurumende, Pablo Iglesias, muCanary Islands yakapa mhosva makambani emagetsi ekutenga makurukota nevatungamiriri kuti vave nesimba rakawanda. MuLas Palmas, Iglesias akaverenga runyorwa rwemakumi matatu ezvematongerwo enyika kubva kuPP nePSOE yakabatana nemakambani makuru emagetsi, akadzivirira chikumbiro chake chekuumba kambani yeruzhinji uye akashoropodza kushandiswa kweEndesa. Chinhu icho, pasina kupokana, chisingazofarirwa nevashambadzi vadiki nepakati vane nzvimbo dzakavhurika mune ino chikamu chemari yenyika.
Kunyanya kana iye ari chikamu che, kana kutsigira hurumende nyowani inobuda musarudzo ichi chitubu. Iko mazwi anga asiri kushomeka mukukanganisa kushomeka kwemhando inobereka. Kuva yakajairwa modhi uye kuti haina zvachose kusununguka kuitira kuti zvinopihwa izvo chikamu chikuru chemakambani ari muchikamu chemagetsi kuvhura kune vashandisi chinogona kuvandudzwa. Munharaunda mune pashoma nepashoma nzira inowedzerwazve simba, zvirinani munguva refu. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti Iglesias akadzivirira chikumbiro chake chekuumba ruzhinji rwevanhu "rinotarisana chiso nechiso nevepachivande" uye rinotendera kudzikisa bhiri remagetsi. Chinhu chinogona kutora chitsva pasi chakakwevera kubva kune aya maitiro.
Uye ivo vakasimuka zvakanyanya mukukoshesa kwavo mumwedzi ichangopfuura kusvika pakuti makambani aya akawandisa. Sezvo huwandu hwakanaka hwevashandisi vemusika wekuenzana vanga vachinyevera. Vanoti inguva yekugadzirisa zvigaro mune izvi zvikwata zvemusika wemasheya, kunyangwe iri kuburikidza nesisitimu yekutengesa. Hazvishamisi kuti vanofunga kuti vane nzira diki kwazvo yekukwira uye nekudaro yavo yekuongorora iri padyo padanho rekutadza kana kutomboipa sezvakangoitika mune mamwe makambani emagetsi. Iko kune zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Maitiro emagetsi: shanduko shanduko kana kugadzirisa?
Zvikamu zvekudzivirira mumusika wemasheya gore rino